🏊‍♀️ Bada | Gaa na Hultsfred
Chọpụta otu n'ime ọdọ mmiri anyị!
Na-achọsi ike itinye mmiri n'ime ọdọ? Gburugburu obodo anyị, enwere ọtụtụ ebe ịsa ahụ mara mma ịhọrọ. Aja n'etiti mkpịsị ụkwụ ma ọ bụ ahihia dị nro - ebe a na-eme ka mmiri dị jụụ adịghị anya. Ọ bụrụ na gị na ụmụaka na-ahọrọ igwu mmiri n'ime ọdọ mmiri dị ogo 27, mgbe ahụ, ọdọ mmiri nke Hagadal kwesịrị nleta!
Ebe ịsa ahụ nke Hesjön
Nabata ebe a na-asa ahụ Hesjön! Enwere ụlọ mposi dị n'èzí, ụlọ mposi nwere nkwarụ, ụlọ na-agbanwe agbanwe. Mpaghara mmịkpọ, ebe igwu mmiri yana jetties na ụlọ ịwụ elu na ogige volleyball. Si na ụgbọala ụgbọala a customizable ụzọ ala
Ängahultsbadet bụ ebe ịsa ahụ na Silverdalen Nnweta na ebe nkiri na-agbanwe agbanwe ụlọ Jetty Volleyball court Toilet
Hụ ọkacha mmasị gị na ezinụlọ nwere ụmụaka. Ebe a na-asa ahụ nwere jetty, barbecue area, outhouse, Accessibility na ebe nkiri Swings Volleyball court Jetty WC Barbecue area
Hagadal igwu mmiri na ebe egwuregwu
Hagadal igwu mmiri na ebe a na-egwu egwuregwu na-enye ebe igwu mmiri, mgbatị ahụ, ịhịa aka ma ọ bụ iso ndị enyi na-a hangingụ kọfị. Facilitylọ ọrụ ahụ dị nso na okike nwere ụzọ ụkwụ mgbatị ahụ mara mma.
Ebe a na-egwu mmiri bụ obere ebe ịsa ahụ n'etiti Järnforsen, ihe dịka 150 m site na ọdụ mmanụ. Mpaghara ịsa ahụ nwere jetti. Nke a bụ mpaghara ime ụlọ ime obodo na
Ihe dị ka kilomita isii na ndịda ọwụwa anyanwụ nke Vena bụ ebe a na-asa ahụ mara mma nke nwere ezigbo akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ maka mmemme. Enwekwara ime ụlọ na-agbanwe agbanwe, ebe a na-asa anụ, ụlọ mposi, swings na
Nnọọ na Kristinebergsbadet, ebe ụmụaka nwere ike ịtụgharị gburugburu na egwuregwu ụmụaka "Kalle kula". Ebe ịsa ahụ na-ewu ewu ma na-eleta nke ọma n'etiti ezinụlọ nwere obere ụmụaka ebe ọ bụ na ọ dị emighị emi. Ebe a
Mpaghara ịsa ahụ a ma ama gụnyere na mpaghara dị n'èzí. With na ụmụaka ndị toro eto nwere ike igwu mmiri gaa ebe a. Ọdọ na-adị omimi miri emi ọ na-ewe obere oge
Linden saa ahụ
Egwu a ma ama, ịkụ azụ na ọdọ mmiri. Okporo ụzọ ịsa ahụ na-efedata ụzọ ya. Linden bụ ubé oyi oyi ọdọ mmiri nke na ụfọdụ ebe nke ukwuu
Ebe a na-asa ahụ Hulingen
Ebe ịsa ahụ Hulingen dị na Hultsfred, n'akụkụ ugwu nke Hulingen. Na-esote ebe ịsa ahụ bụ Camping Hultsfred. Ebe i nwere ike ịzụta mfe ingestion. Na mpaghara dị